Izigqibo zekhamera yeXiaomi Mi CC9 iqinisekiswe ngokusemthethweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Xiaomi iqinisekisa izigqibo malunga neekhamera zangasemva nangaphambili zeXiaomi Mi CC9
Intsapho elandelayo yeXiaomi, eyi ICC yamYenziwe iqinisekisiwe ukuba ifike kwiintsuku nje ezimbalwa. Kwaye, ngaphambi kokuba ibe semthethweni, siyayazi into emasiyilindele, njengoko inkampani isilele ukuyigcina Zonke iinkalo zayo kunye neenkcukacha, Kwaye kuncinci xa inguye lo usixelela ezinye zeenkcukacha zalo, njengakulesi sihlandlo.
I-Mi CC9 iya kuba yiyantlukwano esemgangathweni yeduo eya kwenziwa yile ikunye neMi CC9e, enye esiza kuyityhila ngomhla wokuphehlelelwa kwayo. Ukungabinalo ixhala kunye nokuzola ukulinda, UXiaomi utyhile izigqibo malunga neekhamera zangaphambili nangaphambili zeMi CC9. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ziyintoni?
Icandelo lezithombe zalo modeli lithembisa lukhulu. I-Xiaomi ayibonakalwanga njengenye yeefemu zokuqala ukubonelela ngeyona nto intle ngokubhekisele kwiikhamera, kwaye ingaphantsi kwesicelo sayo sekhamera yemveli, egqithileyo kwizibuko elikhululwe ngabaphuhlisi.GCam kaGoogle uninzi lwazo imifuziselo yayo.
Ifoto efakwe kwikhamera engaphambili ye-32 MP yeXiaomi Mi CC9
Ngaphandle koko, asinakuthi umenzi waseTshayina akaboneleli ngeefoto ezilungileyo. Yinto yokuba iye yagqithelwa ngezinye iinkampani.
Kodwa, ukunika i-twist kwinto leyo, kunokwenzeka ukuba i-Mi CC9 ibonelele ngenketho enomtsalane ukuya kuthi ga kwicandelo lokufota kuba liya kuxhobisa Inzwa ye-megapixel engama-32 ngaphambili, ezinokuthi "zibuyisele ubume bendalo besikhumba", "irekhode ubuhle bomzuzu ngamnye" kwaye isebenze nge-algorithm kaMeitu ye-AI ukufaka ii-selfies ezimangalisayo. (Fumanisa: Iifoto zebhokisi yokuthengisa yeXiaomi Mi CC9 ziye zavela)
Ngasekhohlo, ifoto efakwe ngenzwa ye-MP eyi-48 / Ngasekunene, ifoto ebanzi ene-MP MP engama-48
Imodyuli engasemva yokufota iya kuhamba ngokudibanisa I-586 MP ye-Sony IMX48 inzwa njengekhamera ephambili, Zonke zithethwe nguXiaomi uqobo. Zombini izigqibo ziphakathi kwezona zilungileyo esinokuzifumana kwimarike yangoku. Ke ngoko, siza kubona indlela ezisebenza ngayo ezi zivamvo ekuthatheni iifoto.
Siyathemba ukuba ifemi iya kukuxhobisa ngokulungiswa kwesoftware elungileyo ukwenzela ukuba bangaweli ngasemva kwezinye izixhobo ezifanayo kwaye akufuneki babenayo i-app yekhamera yeGoogle, into ethi, nangona ingekho nzima, yinto engenakwenzeka ukuyifaka ukuze ifumane ezona khamera zinokubakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Xiaomi iqinisekisa izigqibo malunga neekhamera zangasemva nangaphambili zeXiaomi Mi CC9
I-LG W10, LG W30 kunye ne-LG W30 Pro: Uluhlu olutsha lwebhrendi
Khuphela iiVenkile eziBukhoma zemidlalo yevidiyo ye-retro mahala